Maankaab.com | Archive | Aragtida Bulshada
Hargeysi waa caasimada Jamhuuriyada Somaliland, waxay dhacdaa dooxada Galgodon ee deegaanada Oogo, waxayna magaaladu ka saraysaa biyaha bada joog dhan 4,377 mitir. Juquraafi ahaan magaalada Hargeysa waxay saaran tahay buuro, dooxyo iyo deegaan caro bataax leh si la mid ah magaalooyinka kale ee ku yaala Somaliland. Hargeysi waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisa lagu qiyaasay 33 km2 (13 sq mi) waxaana ku nool […]
in baa wuxuu ahaa dadkan aadka u mirqaama, waxaanu aad u jeclaa markasta inuu guriga iskaga qaylo, gurigiisa waxaa joogtay ninkaa bisad (mukulaal) nafta u keentay oo dhibtay, waxa uu jeclaystay inuu fogeeyo kadib jawaan buu ku riday oo uu ku qaaday, markuu toban xafadood dhaafiyay buu meel ku tuuray cidlo ah oo iska soo […]
Dhamaam mahad oo dhan ILAHAY ayaa iska leh,isaga ayaanay u sugnaatay ,sharaf iyo karaamana waxa ay dushiisa ahaatay Nabigeenii Muxamad ahaa SCW,wanaag oo dhanna waxaa koobsaday qofka jidkiisa raacay. Waa wax iska caadi ah in xiligan oo kale falooyin iyo falan-qayn lagu sameeyo madaxwayne markaas uun la doortay,waana mid meesha ku jirta in la bartilmaameedsado […]
Hordhac Mahadinta Eebbe ayaan ku furanayaa, galladdiisa nagu nooleeyay, garaadka iyo agabka kale ee aqoonta lagu kasbado, lagu na weeleeyona hiba ahaanta noo siiyaya. Nebi Muxamed na nabadqab iyo meeqaamkii sare ayaan Rabbiga uga tuugayaa, wehelkiisa in uu naga yeelo na waan wayddiisanaynaa. Qoraalkan yar dulucdiisu waxa ay ku dul qotontaa kor-ka-xaadinta kacaa kufkii dadku […]
3rd December 2017 No Comment
W/Q: Ibrahim Khadar Reer Kala-jeed waa isku luuqad, dhaqan, midab iyo jinsiyad. Intaas oo midaysa darteed, haddana waxa isu keena aragtidooda oo muujiya gabadh marna qurux badan, marna fool-xumadeeda aan loo dulqaadan oo dunidan caashaqeedu wareeriyey-waa ‘Siyaasad.’ Ilma Kala-jeed waxay isugu jiraan Balaayo-sheeg, Mirqaan-weyne, Dawlad-ku-nool, Aqoonyahan, Miskiin iyo Gacansi-silicsade. Maalin Jimce ah oo goor-sheegtu tahay […]
Qalinka: Axmed Iid Aadan Laba qof oo mawduuc isku mid ah ka hadlaya ayaa laga yaabaa in uu midi dadka aad u saameeyo oo uu gaadho heer uu dareenkooda kiciyo ama uu aragtiyo ay aad u aaminsanaayeen wax weyn ka beddelo. Midna waxa laga yaabaa isla marka uu hadalka bilaabo ba in la caajiso oo la jeclaado […]
Maxay ku kala duwan yihiin “Dhaqan” iyo “Hidde”?
Qalinkii : Axmed Iid Aadan Ummad kastaaba waxa ay leedahay dhaqan iyo hidde u gaar ah oo ay ummadaha kale kaga duwan tahay. Dhaqanka ay ummadi leedahay ma aha wax uu qof keli ahi leeyahay ama wax cid gaar ah oo ummaddaas ka mid ah u xidhan, ee waa wax qiima leh oo la wada leeyahay, si […]
WQ: Cabdishakuur Muxumed (Heersare) Waxa uu ku nool yahay dacalka waqooyi ee caalamka. Habeen keliya isuma arko inuu ka maqan yahay dalkiisii hooyo. Mararka qaar waxa ku wada kulma farxad iyo naxdin is barbar socda, oo xaalado kala duwan ku kala saabsan. Waxa dhib ugu filan dhawaaq aan laga fiirsan oo si yar loogu tiraabay, […]
Maxay Qoreyaashu U Noqdeen Dadka u gu Wahsiga Badan?
Cilmi-nafsiga iyo isirka wahsiga ku dhisan sug, sug, sug. Sida qoreyaasha badankooda waxa aan ahay caadayste wahsi badan. Markii aan ku guda jiray qorista maqaalkan waxa aan hubiyay sanduuqayga farriimaha ku dhawaad saddex kun oo jeer, waxa aan sameeyay oo haddana tuuray liisas badan oo raashin ah, waxa aan galay dagaal wakhti dheer oo dhinaca […]
W/Q: Cabdixakiim Tiyari Eebbe ( kor ahaaye) waxa agtiisa ugu qaalisan waa carruurta Nebi Aadem dhaley, iyaga ayaana waxkasta ka sarreeya oo ka qiimo badan; dhanka kalena, waxaa lagu lammaaneeyey ruux kasta oo sanku-neefle ah ( karaamo) ilaahey xaggiisa ka ahaatey. Eebbe ( kor ahaaye) umuu abuurin ilmo Nebi Aadem u jeeddo aan ka […]